I-ANC iyogcina iphumile emandleni, ‘uzobuya u-Jesu’ – LIVE Express
I-ANC iyogcina iphumile emandleni, ‘uzobuya u-Jesu’
Msizi Zondi | 11 August 2016 | Columns, Views |
Njengoba selidume ladlula ngokhetho lohulumeni basekhaya obelubhekwe ngabomvu kuya ngokuya kucaca okwekati elimhlophe ehlungwini ukuthi akusekude kuphenduke amatafula ekuholweni kwezwe laseNingizimu Afrika.
Kuyiqiniso elingephikwe ukuthi iqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC), noma abanye babaholi bayo kanye nabalandeli, abafuni nokuyizwa indaba yokuthi leli qembu kuyoke kuse ngelinye ilanga lingekho emandleni, in fact they don’t even believe it possible. That is why uMengameli wayo i-ANC, ophinde abe nguMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, eseke wacashunwa ethi i-ANC iyobusa kuze kubuye uJesu.
And that is why bebegxeka ama-surveys ayekhomba ukuthi i-ANC izokhala ngaphansi komasipala abangama-metro, okuyi-Nelson Mandela Bay, i-Tshwane kanye ne-Johannesburg. They accused u-eNCA ngokuchema.
For now, the ANC is still safe but kancane, kancane, lukhulu luyeza luyanyelela. The reason why it will not happen manje ukuthi there are lot of circumstances that favour iqembu elibusayo. But the sad part is that those circumstances ayashabalala usuku nosuku.
Okukuqala, udaba lokubuswa ngengcindezelo kweNingizimu Afrika iminyaka eminingi kuseyisilonda esingakapholi kubantu abaningi kuleli ikakhulukazi labo abazibonela ngawabo. So i-ANC njenge-liberation movement, baningi abavoti abasathembekile kuyona and most of them bazimesele ngokuthi bayivotele baze badlule emhlabeni.
Okwesibili ukuthi iningi labantu abavotayo liqale libheke ibala, i-background and even ne-language ekhulunywa umholi weqembu noma abaholi beqembu ngaphambi kokuba likhethe ukuthi lizovotela bani.
Yingakho nje uthola ukuthi FF Plus ivotelwa kakhulu amaBhunu, yi-EFF ivotelwa kakhulu abantu abaMnyama, i-ANC ivotelwa kakhulu abantu abaMnyama, bese kuthi i-Democratic Alliance ivotelwa kakhulu ngabeLungu, amaKhaladi kanye namaNdiya.
Futhi yingakho nje uthola ukuthi i-Inkatha Freedom Party (IFP) ivotelwa kakhulu ngabantu abangamaZulu futhi abaKwaZulu Natali (KZN), i-National Freedom Party (NFP) ivotelwa kakhulu abantu abangamaZulu futhi abase-KZN, i-United Democratic Movement (UDM) ivotelwa kakhulu abantu abangamaXhosa futhi abase-Eastern Cape.
i-ANC yize noma ivotelwa kakhulu yizinhlanga ezehlukene ezifundazweni zonke, kodwa kuningi kakhulu ukwesekwa kwayo e-KZN, njengoba uMengameli wayo, uZuma, engowakhona. i-EFF isekwa kuzo zonke izifundazwe kodwa kuningi kakhulu ukwesekwa kwayo e-Limpompo kunakwezinye izifundazwe ngenxa yokuthi umholi wayo, u-Julius Malema, udabuka khona.
Iningi labantu kuleli, okungabamnyama, abanalo ulwazi olwanele ngokusebenza kwahulumeni kanye nokuphathwa kwezwe kanti futhi abafundile – lokho kwenza ukuthi bangakwazi ukuzicabangela ngokuzimela without relying kosopolitiki, abathembisa izulu nomhlaba and end up being manipulated by them.
Yingakho nje abantu abaningi, emazingeni aphansi, bene-mentality yokuthi osopolitiki or uhulumeni babenzela i-favour ngokuthi balethe i-service delivery. Abanye they even think ukuthi i-service delivery is only limited to amanzi, ugesi, ithoyilethi nomgwaqo and that’s all. They can’t think of i-service delivery beyond those things.
Esinye isizathu abantu abaningi abangasinaki yi-role edlalwa u-SABC ekutheni i-ANC iqhubeke ibe semandleni. u-SABC angakubikela cishe zonke izindaba without fear or favour but uma kuziwa kuhulumeni nakwipolitiki kuba nzima nokubona umehluko phakathi kwe-SABC nomnyango wezokuxhuma kuhulumeni, noma umehluko phakathi kwentatheli ya-SABC nomuntu okhulumela uhulumeni or iqembu elibusayo.
Kwakuthi uma ngabe uZuma ekhuluma ngezinto esezenziwe nguhulumeni ka-ANC, okubalwa ukulethwa kwamanzi, ugesi, imigwaqo nokunye, bese u-SABC ekhombisa izithombe ezihambisana nalokho okushiwoyo. But kwi-rally ye-DA kanye neye-EFF, nawo akhonjiswa bukhoma, akwenzekanga lokho.
Ziningike nezinye izizathu ezenza i-ANC ivunwe yisimo samanje okubalwa kuzo ukuba nemali nama-resources okuqhuba ama-campaigns kodwa iqiniso ukuthi ziya zincipha izinto eziyivunayo kanti ziyanda izimo ezingayivuni.
Okokuqala nje, leli culo lokuthi uKhongolose ‘wakhulula’ abantu bakuleli liya ngokuya liphelelwa ushathini usuku nosuku. Bayanda abantu abasha (born frees) abangazi lutho ngobandlululo and bayancipha abadala, abavota ngokuba loyal kwi-ANC.
So indaba ‘yokukhulula’ abantu slowly becomes irrelevant and abantu babheka ama-challenges ababhekene nawo manje okunemilando.
Okwesibili, kwi-base yabavoti be-ANC kukhona kakhulu abantu abasemazingeni aphansi, nokungabantu abaxakekile ngokwesimo somnotho kanti iningi labo alifundile. Abanye yilabantu abakulesi sigaba okuthiwa yi-middle class, nokungabantu abasebenzayo nabanamabhizinisi kanti iningi labo lifundile.
Inkinga-ke ngabantu abakwi-middle class ukuthi abakhohliseki kalula njengalabo abasemazingeni aphansi. Ngaphezu kwalokho ukuba ne-access kwabo kwi-information kwenza ukuthi bakwazi ukuzicabangela nokuthatha izinqumo independently and sometimes i-propaganda ayisebenzi kobona. Yingakho nje kungathusi ukuthi ukwesekwa kwe-ANC yi-middle class kuyehla.
Okwesithathu, kunale perception ekhona kubantu yokuthi i-ANC kanye nohulumeni wayo bagcwele inkohlakalo, bamosha imali kanti futhi bazithwele. Yes, as usual ihlale iphikwa noma kugxekwe abasho njalo, kodwa abantu bacabanga into abayibonayo nabayizwayo and bakholwa iyona.
Okwesine, uqhekeko, ukuhlukana phakathi kanye nabantu abakwi-ANC abangenandaba neqembu kodwa abazifezela izinhloso zabo.
Okhethweni lohulumeni basekhaya lonyaka ka-2016 kube nesibalo esikhulu sabantu abangenela ukhetho ngokuzimela kanti iningi labo bekungamalunga e-ANC akhala ngohlelo lokuqokwa kwamakhansela kanjalo nokungalalelwa kwezikhalo zabo. Abanye babo bawinile emawadini abebengenele kuwo ukhetho.
Okunye yilolu khondolo lukuthi njalo uma kunezinketho (election conference) kwi-ANC kube nama-factions abukeka engapheli nasemva kokhetho kanti lokho kwenza ukuthi iqembu lingabumbani.
Isibonelo salokho yi-ANC e-Gauteng, okubona ngisho ingane encane ukuthi azihoshelani noMsholozi kanye nalabo abeseka uMsholozi. Lokhu kuphinde kwagqama ngesikhathi semikhankaso yokhetho njengoba labo okukholakala ukuthi abamuzwa kahle okaNxamalala imikhankaso yabo ibigxile e-Gauteng.
Ukushiya kwabaholi kwi-ANC kanye nokusungulwa kwamaqembu amasha nakho kuyayilimaza i-ANC.
Iqiniso ukuthi ukuba i-ANC ayimxoshanga u-Julius Malema ngabe ayikho into okuthiwa yi-EFF, nokwiyona edlale i-role enkulu ekutheni i-ANC yehlelwe ukwesekwa, nokuyinto esinike ithuba i-DA.
Inkinga ekhona ebhekene ne-ANC ukuthi ukwesekwa kwayo kulokhu kwehla ukhetho nokhetho kanti okwamanye amaqembu anjenge-DA ne-EFF kulokhu kukhula ukwesekwa kwawo. So that is a ticking time bomb that is just waiting to explode and it clearly tells you ukuthi the change in power is inevitable.
But yize noma abanye sebethi i-ANC ingase ingcwatshwe ngokhetho lukazwelonke ngo-2019, -kubukeka kungakezokwenzeka ngo-2019, yize noma kuzogcina kwenzekile.
Kodwa maningi amathuba okuthi i-ANC ilahlekelwe yi-Gauteng ngo-2019 uma izinto ziqhubeka ngale ndlela ezihamba ngayo and maningi namathuba okuthi kuphinde kwehle ukwesekwa kwayo ezweni lonkana.